Homeमनोरञ्जनकास्की २ मा महिला नेत्री केसी र भट्टराई आमनेसामने, कस्ले मार्ला बाजी ?
October 27, 2019 kandai kanda2मनोरञ्जन
कार्तिक १०, पोखरा /
आउँदो मंसिर १४ गते कास्की २ मा हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले विद्या भट्टराई र बैकल्पिक शक्तिबाट साझा पार्टिले रजनी केसीलाई उम्मेदवार वनाएका छन ।
तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त ठाउँमा नेकपाले उनकै जीवनसाथी विद्यालाई उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको हो। यस्तै बुधबार साझा पार्टीले आफ्नोतर्फबाट रजनी केसीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध नेतृ केसी पोखरा विश्वविद्यालयमा उपप्रशासकको २० वर्षे सेवावधि सकेर पेन्सन पाकेपछि राजीनामा गरी साझामा प्रवेश गरेकी हुन्। समाजशास्त्रमा एमफील गरी रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत भट्टराई स्वर्गिय रवीन्द्र अधिकारीको उत्तराधिकारीको रुपमा सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस भएकी हुन ।
साझा पार्टीले उठाएकी उमेदवार रजनी यसअघि नेपाली कांग्रेस निकट भ्रातृसंघमा सक्रिय नेतृ हुन् । २०५४ को स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघको तर्फबाट सदस्यमा लडेको अनुभव छ केसीसँग । स्ववियुमा उनको प्यानलै हारेको थियो । उनी त्यसबेला पराजित भए पनि व्यक्तिगत रुपमा भने उनले राम्रै मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
यसले उनको लोकप्रियता प्रष्ट पार्छ । यतिमात्रै होइन, पेशागत हिसाबले पोखरा विश्वविद्यालयमा कार्यरत रहँदा कर्मचारी संघको अध्यक्ष पनि भइन् । यस्तै, प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेकी केसी गत भदौ २९ गतेमात्रै साझा पार्टी प्रवेश गरेकी हुन् । पोखरा विश्वविद्यालयमा उपप्रशासक रहेकी केसीले राजीनामा दिएर साझाको पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेकी हुन् ।
लामो समयसम्म कांग्रेस राजनीति गरेपछि साझा प्रवेश गरेकी केसीलाई पत्रकारको प्रश्न थियो– के तपाईँ भोट काट्नको लागि उमेदवारी दिन लाग्नुभएको हो ? उनको जवाफ थियो, “चुनाव जित्नको लागि नै उठेकी हुँ ।” उनले जवाफसँगै कांग्रेसलाई बिग्रिएको बसको समेत संज्ञा दिइन् ।
“काठमाडौं जाँदा मुग्लिङमा पुगेर बस बिग्रियो भने अवश्य पनि गन्तव्यमा नपुगी बिग्रेको बसमा त म बसिराख्दिन । मैले परिवर्तन गर्नैपर्छ भनेर साझा पार्टीमा आबद्धता जनाएकी हुँ । मैले राजनीति कुनै पदमा पुगौँला पैसा कमाउँला, निजी स्वार्थ पूरा गरौँला, परिवार बनाउँला, आलिसान जीवन बनाउँला भनेर गरेको होइन,” उनले भनिन् ।
नेकपाले भने जित्नै पर्ने दबाब रहेकाले अधिकारीकी श्रीमतीलाई नै उम्मेद्वार बनाउन सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
लक्ष्मीमातालाई खुसी पार्न चढाउनुहोस् यी पाँच चीज